We.com.mm - လူအစစ်တွေကော ဟုတ်ရဲ့လား ဟင် . . .
လူအစစ်တွေကော ဟုတ်ရဲ့လား ဟင် . . .
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သက်ရှိထင်ရှားစွာနေထိုင်နေကြတယ်ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်တို့တွေ မသိသေးတဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားလွန်းတဲ့အရာတွေ များစွာရှိကြပါတယ်။ ခေတ်မှီတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ရှိတဲ့အချိန်တွေကို ဗဟုသုတအတွက် အကျိုးရှိရှိသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ သိသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှ တဆင့် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ထူးခြားဆန်းပြားလွန်းတဲ့တချို့အရာတွေဆို ကျွန်တော်တို့ကို အစစ်နဲ့အတု ခွဲခြားနိုင်ဖို့အတွက် ဒွိဟ ဖြစ်စေနိုင်တာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ အိပ်မက်လား တကယ်လား ဖြစ်သွားတဲ့အထိပေါ့။ တခြားမကြည့်ပါနဲ့ … ခု ဖော်ပြထားတဲ့ သူတို့တွေကိုလည်း တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်လေ….....။
1. Amoo Hadji (အညစ်ပတ်ဆုံးလူသား)
ဒါဟာ ရုပ်ရှင်ကားရိုက်နေသလားလို့တောင်ထင်ရတယ်။ အသက် ၆၀ ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ Amoo Hadji ရဲ့ အပြင်ပိုင်းပုံစံဟာ ပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ဆံပင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ထူးဆန်းတာမြင်မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆံပင်တိုဖို့အတွက် သူ့ဆံပင်ကို သူမီးရှို့ထားလို့ပါ။ များသောအားဖြင့် သူက ဒီလိုပဲနေတာများပါတယ်။ ရေလည်းမချိုးဘူး။ သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ဒီအတိုင်းပဲနေလို့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ။
သူကတော့ ပါရှားနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ကို စိတ်ဆိုးအောင်တော့ သွားမလုပ်နဲ့။ သင့်ကို အစိတ်စိတ်အမွှားအမွှားဖြစ်သွားအောင် သူ့ရဲ့အားနဲ့ လုပ်ချလိုက်လို့ရတယ်။
3. Gary Turner (အသားအရေ ချဲ့လို့ရတဲ့လူ)
Gary ဟာ အလွန်ရှားပါတဲ့ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ehlers-Danols ရောဂါကို ခံစားနေရသူတစ်ဦးပါ။ အဲရောဂါကတော့ သူ့အသားအရေကို တခြားတွေထက်ပိုမို ဆွဲဆန့်ဖြန့်လို့ရပါတယ်။
4. Michel Lotito (ဘာမဆိုစားနိုင်တဲ့လူ)
ပုံတွေ့တွေ့ချင်းဆို နောက်နေသလားလို့တောင်ထင်ရတယ်။ Michel Lotito ရဲ့ အပြုအမူတွေဟာ ကြောင်တောင်တောင်အပြုအမူတွေဟာ ဘယ်အရာမဆို သူစားနိုင်တယ်။ မှန်တွေ၊ သတ္တုပစ္စည်းတွေ စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါဟာ တကယ်ဖြစ်တယ်တဲ့။ အဆန်းကြီးနော်။
5. Carlos “Halfy” Rodriguez (ခေါင်းတစ်ခြမ်းလူသား)
Carlos ဟာ ကားမတော်တဆဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ အဝေးတစ်နေရာကို လွင့်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆရာဝန်က သူ့အသက်ကို ကယ်နိုင်ဖို့အတွက် ဦးခေါင်းခွံတစ်ဝက်ဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ အရာအားလုံးအဆင်ပြေပြီး ခေါင်းလေးတစ်ခြမ်းတည်းနဲ့သူအသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။
6. Francisco Domingo Joaquim (ပါးစပ်အကြီးဆုံးလူသား)
ဒါက အံ့သြစရာကောင်းလွန်းတဲ့ Talent တစ်ခုလို့ပြောရမယ်။ ဘယ်နှယ့်အဲလောက်ထိ ကြီးနေရာတာလဲမသိဘူးနော်။ YouTube မှာ သူ့ရဲ့ ပါးစပ် ဘယ်လောက်ထိ ကြီးကြောင့် Video ရိုက်ပြပြီးကတည်းက သူဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပါးစပ်အကျယ်ဆုံးလူသားတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ သင်တို့လည်း Talent တခုအနေနဲ့ မှန်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ပါးစပ်ကို ဖြဲကြည့်ပါလား။ :P
7. Chandra Bahadur Dangi (ဒီဂြိုလ်ထဲမှာ အပုဆုံးလူသား)
သူဟာ အလွန်ပုလွန်းလို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပုဆုံးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အမြင့်ကဆိုရင်တော့ ၅၄.၆ စင်တီမီတာ သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
8. Sultan Kosen (အရပ်အမြင့်ဆုံးလူသား)
သင့်ရော သစ်ပစ်ထက် မြင့်တဲ့သူ မြင်ဖူးလား။ သင့်ရဲ့ အဖြေက NO လို့ပဲထင်တယ်နော်။ Sultan Kosen ဟာ အရပ်အမောင်း ၈ ပေနှင့် ၃ လက်မ မြင့်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အရပ်အမြင့်ဆုံး လူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
9. Yu Zhenhuan (အမွှေအထူဆုံးလူသား)
သူက Chimpanzee လား ဒါမှမဟုတ် မျောက်လား။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ သူက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမွှေးအထူဆုံး လူသားတစ်ယောက်ပါ။ သူက တရုတ်ပြည်ကပါ။ သူရဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေကြောင့် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ၉၆% ဟာ ထိုအမွှေးအမျှင်တွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းထားပါတယ်။
Uniform အသစ်တွေနဲ့ တမူ ဆန်းသစ်သွားတဲ့ Hainan Airline က Cabin Crew လေးတွေ
11 months ago by Riko
အိမ်ရှင်မများအတွက်နည်းလမ်းကောင်း (၉) ချက်
11 months ago by Hamny
မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ကျစ်ဆံမြီးဆံပင်ပုံစံ (၄) မျိုး
11 months ago by Kevin Han